बिदेसिनु रहर होइन, बाध्यता नै हो - Myagdi Online
बिदेसिनु रहर होइन, बाध्यता नै हो
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद्द्वारा साउन २८ गते बुधबार आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस–२०७७’ मा भिडियो सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, “युवा बाध्यतावश विदेश जानु पर्दैन ।” यहींनेर प्रश्न उठ्छ, उसो भए अहिले जो विदेश जानका लागि मरिहत्ते गरिरहेछन्, ती सबै रहरले जान लागेका हुन् ? अथवा यसअघि जो विदेश गए ती सबै रहरले गएका हुन् ? अवश्य होइनन् । जो विदेश जान खोज्दै छन् ती बाध्यताले जान खोज्दै छन् र जो विदेश गएका छन् ती पनि धेरैजसो रहरले नभई बाध्यताले गएका हुन् । स्वदेशमै केही गरिखाने र कमाइ गर्ने अवसर भए कसैलाई विदेश जाने रहर हुँदैन । दुःखसुख जे गर्नुपरे पनि अथवा जे सहनुपरे पनि स्वदेशमा जस्तो आनन्द र सुरक्षित महसुस विदेशमा पक्कै हुँदैन । स्वदेशमा ऐय्या भन्दा कठै भन्नेहरू धेरै भेटिन्छन् । तर, विदेशमा त मरे पनि चासो दिने कोही हुँदैनन् । यस्तो थाहा पाईपाई कमाउनकै लागि मात्र विदेश जाने रहर कसैलाई हुँदैन । स्वदेशमा अवसर नपाउँदाको अवस्थामा विकल्पका रूपमा मात्रै विदेशलाई रोजेका हुन् युवाले । युवा मनले भन्छ, स्वदेशमै केही गर्न पाऔं । तर, राज्यले नै युवालाई केही गर्ने र केही बन्ने अवसर नदिँदा हरेक वर्गका युवा विदेश पलायन भएका हुन् ।
विदेश जाने युवामा शिक्षित र दक्षमात्रै छैनन् । पछिल्लो समय निरक्षरदेखि सामान्य साक्षर युवा पनि अवसरको खोजीमा बिदेसिएका छन् र बिदेसिन खोज्दै छन् । दक्षमात्रै होइन, हातमा कुनै सीपै नभएका युवा पनि अवसरको खोजीमा बिदेसिएका छन् र बिदेसिन खोज्दै छन् । देशका लागि अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्ति पनि अवसरको खोजीमा ठूलो संख्यामा बिदेसिएका छन् । अध्ययनका लागि विदेश गएका विद्यार्थी उतै रोकिएका छन् । युवावर्गले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखेका छैनन् । त्यसैले उनीहरू सुरक्षित भविष्यको आशामा बिदेसिन लालायित छन् । यस्ता युवालाई स्वदेशमै रोक्ने र स्वदेशमै रमाउन दिने तत्कालीन र दीर्घकालीन कुनै प्रभावकारी योजना सरकारसँग छैन । भएका नीति, योजना र कार्यक्रम पनि कागजमा सीमित छन् । सरकारका योजना र घोषणा केवल नारा र भाषणमा सीमित छन् । हरेक वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने युवालक्षित नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तत्परता सरकारले देखाएको भए देशका ऊर्जाशील युवाले बिदेसिनका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने थिएन र विदेशमा गएर पनि फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने थिएन ।
अवसरको खोजीमा रहेका युवाको क्याराभान जताततै देखिन्छ । अध्ययनका लागि विदेश जान भिसा र नो अब्जेक्सन लिने युवाको लर्कन होस् या कामका लागि बिदेसिन पासपोर्ट बनाउने युवाको लर्कन होस् अथवा कामका लागि विदेश जान भाषा परीक्षा दिन आवेदन बुझाउन लाइनमा उभिएका युवाको ताँती होस्; युवाको यस्तो लर्कनले स्वदेशमा अवसर नभएको र अवसरकै खोजीमा विदेश जान बाध्य हुनुपरेको यथार्थलाई पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ ।
काराेबार अनलाइनबाट साभार गरिएकाे हाे ।
मौवाफाँटमा बहुउदेश्यीय सभाहल निर्माण सुरु, चिमखोलामा बेलिब्रिज बन्दै 10 घण्टा अगाडि
म्याग्दीका पौडेल न्यूजिल्याण्डको लागि पर्यटन दुतमा नियुक्त 12 घण्टा अगाडि